Uvimbela "amanzi emvula aqinile" ngenqubo engaguqula ukulima - i-Afrikhepri Fondation
ngolwesithathu, meyi 12, 2021
Uqamba "amanzi emvula aqinile" ngenqubo engaguqula ezolimo
SU-ergio Rico ungumsunguli wenqubo engaguqula ezolimo. Siqukethe nokwandisa ukusetshenziswa kwamanzi emvula. Iminyaka eyishumi, i- Mexico uhlushwa isomiso esesabekayo enyakatho yezwe. USergio Rico ucwaninge ukuthi zingasetshenziswa kanjani kangcono izimvula ezincane eziwela kulezi zindawo ezomile.
"Ngokusebenza ekutholeni amanzi emvula, kusho uSergio Rico kwaPoint.fr, sithole indlela yokuwaqinisa ukuze siwanikeze elinye inani. Ngigqugquzelwe ngamanabukeni ezingane ezivumela uketshezi ukuthi lungene esikhaleni esincane futhi kulapho-ke lapho ngaba nomqondo wokuguqula amanzi emvula ngokuwagcina esesimweni samangqamuzana ku-acrylate emunca kakhulu isici sayo ukugcina izikhathi eziphindwe ka-500 isisindo sayo emanzini ngaphandle kokushintsha ukwakheka kwawo kwamakhemikhali. "
Amanzi emvula, aqoqwe ophahleni, ahanjiselwa ethangini lapho kwanele khona ukuthela umthamo wamagremu ayi-1,5 we-potassium polyacrylate ilitha elilodwa lamanzi. Emizuzwini engu-1, sibona inqubo yokuqiniswa kwamanzi. Ionization nemvula bese kwenzeka okuvumela ama-molecule wamanzi ukuthi anamathele kuma-polymers, okuholela emanzini ezinhlamvwini, esimweni esiqinile. Ngale nqubo, asikho isidingo samaphampu, amapayipi, amandla kagesi, amathangi okuhambisa uketshezi. Amanzi aqinisiwe angafakwa ezikhwameni zepulasitiki ezingagcinwa kalula kuze kudingeke.
Izitshalo azinakho ukucindezeleka
I-Potassium polyacrylate ivumela uketshezi ukuthi lukha i-gel futhi luvuselele amanzi kaningi ngendlela ofuna ngayo iminyaka eyisishiyagalombili kuya kweyishumi. Luhlobo lwempuphu emhlophe ebukeka njengoshukela. Kule ngxube, usokhemisi waseMexico, olazi kahle izwe lakhe, usebenzisa njengeyunithi yokukala ikepisi yanoma iliphi ibhodlela lesiphuzo esenziwe nge-carbon, ngoba uyazi ukuthi abalimi bezindawo ezisemakhaya noma amadolobhana amancane okuqondiswe kuwo lokhu ngokuyinhloko. ubuchwepheshe abunaso isikali esinembile sokulinganisa i-1,60 gram ye-polyacrylate.
Iphilisi eligcwele phama umthamo odingekayo ukuqinisa amanzi adingwa izitshalo ezintathu zikatamatisi. Ensimini yommbila, isikhwama esingama-25 kg singanisela cishe ihektha elilodwa. Ukukhombisa ukwethembeka kokwasungulwa kwakhe, uSergio Rico uqhathanisa esifundazweni saseSonora, lapho i-thermometer inyuka kalula ngaphezu kwama-degree angama-1, izinhlelo ezimbili zokunisela. Ngohlelo lwendabuko, lapho umlimi elinda isikhathi semvula ukunisela insimu yakhe, isivuno singama-45 kilos ommbila ehektheleni ngalinye. Ensimini kamakhelwane, isivuno esifanayo nemvula eqinile sikhiphe isivuno samathani ayi-600 ehektheleni ngalinye.
Lolu hlelo lokunisela, ngokungafani nolunye olufana ne-sprinkler noma i-drip irrigation, yilona kuphela olusebenzisa amanzi aqinile. Imiphumela iyamangalisa, njengoba impande yezitshalo igcinwa inomswakama izinyanga eziningana futhi ibuyisela amanzi emzimbeni lapho kuneshawa noma ukuniselwa okuncane. Ngakolunye uhlangothi, lesi sitshalo asinakho ukucindezeleka, ngoba siyazi ukuthi singathembela enanini lamanzi elidingayo ngaphandle kokulahleka, ngoba amanzi aqinile awaphunyuki. Etafuleni lakhe, uSergio Rico usikhombisa isitshalo esihle esiluhlaza okwase kuphele izinsuku eziyi-176 singaniselwa.
Akekho umprofethi ezweni lakhe
USergio Rico ubelokhu ethuthukisa inqubo yakhe iminyaka emihlanu. Ifake isicelo selungelo lobunikazi emhlabeni wonke ngaphansi kwegama elithi "Silos de Agua". Indlela yakhe isivele isetshenziswe ngempumelelo ku India izithelo, amakinati, ukotini, ukolweni nezitshalo zesundu. Ngohlelo lwendabuko, lezi zilimo zidinga ukuchelelwa ngamalitha amanzi angama-80 ngesonto, ngokusebenzisa amanzi aqinile, kuthatha amalitha angama-50 kuphela ezinyangeni ezintathu. Impumelelo efanayo ku- Colombia, e-Ecuador, eSpain nasePortugal lapho inqubo yayo isetshenziselwa izitshalo ezishisa kakhulu noma ezinhlelweni zokutshala kabusha amahlathi. "Abalimi, abazaziyo izindleko zokukhiqiza, yibo abanentshisekelo enkulu, ngoba babona ngokushesha ukonga amanzi abazokwenza ngomkhiqizo wethu." ISilos de Agua ayibizi kakhulu, ngoba isikhwama esingama-25 kg ngehektha elilodwa sibiza ama-euro angama-400 kuphela futhi sihlala iminyaka eyishumi.
Enye inzuzo ukuthi amanzi aqinile ahanjiswa kalula, okusebenziseka kakhulu ezindaweni okunzima ukufinyelela kuzo, kungaba ngemuva komnyuzi noma endizeni enophephela emhlane. Izinkampani ezinkulu zezolimo zaseMexico seziqala ukujwayela lobu buchwepheshe obusha futhi ngokuya ziba nesitokisi samanzi aqinile uma kwenzeka izimvula zingama ngaphambi kokuvuna. Futhi ngumkhiqizo ofanele wokumisa imililo. Ngokubeka izikhwama zamanzi aqinile phansi, imililo ihlangana nenqwaba yomswakama engaphumi, iyazimela ngaphandle kokubeka engcupheni izimpilo zabacimi bomlilo.
Iphupho likaSergio Rico bekungukuqinisekisa uNgqongqoshe Wezolimo waseMexico ukuthi aqalise umkhankaso wolwazi nosizo lwezobuchwepheshe ukunika amandla izindawo ezithinteke kakhulu ngokuguquguquka kwesimo sezulu ukuze zikwazi ukusebenzisa amanzi emvuleni. Ungathanda ukubona ubuchwepheshe bakhe busebenzela abalimi abampofu kakhulu baseMexico. Okwamanje, ithola ihlombe, amadiploma namagama amahle. Waphakanyiselwa Umklomelo Wamanzi Emhlabeni ngo-2011 yiStockholm International Water Institute, uSilos de Agua unethemba lokuthi uzowina umklomelo ngo-2012.
Njengoba ifakwe ewindini, lo mshophi kagesi unikeza amandla mahhala
U-Anelka: Okungaqondakali - Idokhumentari (2020)
Izwe eligcina ukuhlakanipha - okwedokhumentari (2020)
UKemtiyu Cheikh Anta - Imibhalo (2017)
Yabelana ngendatshana yakho